प्रकार र लाभ: को लागि वाहन एयर फिल्टर
इन्धन दहन को दक्षता केही अवस्था, यो purified हावा को प्रयोग टिप्पण लायक छ जो बीच बनाईएको हो वृद्धि गर्न। यो समारोह कार लागि हावा फिल्टर द्वारा गरिन्छ।
अक्सिजन इन्जिन मा इन्धन पूर्ण दहन लागि आवश्यक छ। यस मामला मा, यो शुद्ध र ठूलो पर्याप्त मात्रा आउनु पर्छ। यस्तो समस्या मोटर वाहन उद्योग को सुरुतिर मा सिर्जना गरिएको थियो सुलझाने लागि हो। गहन र चालु विभिन्न परीक्षण को परिणाम स्वरूप, यो इन्जिन क्षति र सञ्चालनको अवधि prolonging को likelihood कम जो विशेष सुरक्षा, संग सज्जित हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट भयो।
कार एयर फिल्टर विभिन्न बाह्य प्रदर्शन हुन सक्छ। यो बावजुद सञ्चालन सिद्धान्त सधैं नै छ: एक विशेष हावा पाइप त्यहाँ एउटा फिल्टर तत्व हो जो भित्र निर्माण, प्रवेश मार्फत। धूलो कणहरु thereon सञ्चय एक प्रवाह मा पारित, र सफा हावा इन्जिन धेरै गुना मा बग्छ।
यो भाग, जो निम्न विशेषताहरु द्वारा फरक प्रजातिहरू, एक पाहुना को शुरूआत देखि:
चरणमा को निस्पंदन नम्बर;
फिल्टर सामाग्री को विवरण निर्माण;
फिल्टरिङ विधि (चक्रवात, एकचोटि माध्यम, inertial-तेल);
Embodiment (, फ्लैट वर्ग वा राउन्ड आकार)।
को प्रयोग सबैभन्दा व्यापक फिल्टर को प्रकार जस्तै शून्य प्रतिरोध, कागज र तेल स्नान। वर्तमान मा, विशेष ध्यान माइलेज वृद्धि गर्न दिइएको छ, त्यसैले निर्माताहरु कम बारम्बार परिवर्तन हावा फिल्टर अनुमति विभिन्न उपाय लिइरहेका छन्। कार दिन - एक औद्योगिक वातावरण मा फिल्टर प्रयोग समय गणना गर्दा पनि खातामा लिएको छ जो परिवहन गुणस्तर, एक उपाय हो।
एक कागज आधारित संग एक उपकरण
सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प कागज फिल्टर, को नालीदार सामाग्री मा आधारित छ जो गर्न सकिँदैन। यसको संरचना फाइबर र जरिवाना चिस्यान मा ढिलाइ गर्न अनुमति दिन्छ हावा खुलेर therethrough बित्दै गर्दा। सेवा जीवन एक रन मा गणना, र 15,000 किलोमिटर भित्र छ। वाहन शायद प्रयोग गरिएको छ भने, उपकरण हरेक दुई वर्ष प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। कम लागत मुख्य फाइदा पनि कम वजन, छिटो स्थापना र सजिलो प्रयोग टिप्पण लायक छ। तर कार एयर फिल्टर कमियां बिना छन्। तिनीहरूले चिस्यान र यांत्रिक तनाव उजागर गर्दै छन्। कारण कम आधार कागज बल गर्न, तिनीहरूले bellows को क्षति को मामला मा व्यर्थ हुन्छन्। पनि पास फिल्टर विशेषताहरु समय दूषण निकाल्ने कारण अधिक अस्वीकार गर्छन, यो इन्जिन गुणस्तर असर गर्छ।
यस्तो हावा फिल्टर GAZ र अन्य ब्रान्डहरु पनि फैलँदै पर्याप्त प्राप्त। यो फिल्टर आधार रूपमा खनिज तेल प्रेरित एक सरल डिजाइन र एक अलग आवास, जो मार्फत हावा प्रवाह, wherein तेल सबै दूषण र ठीक कणहरु रहन मा स्थित छ। यो embodiment को मुख्य विशेषता धेरै प्रयोग को संभावना छ। तेल घटक को दूषण को डिग्री तेल स्रोतहरू प्रयोग पछि, यन्त्र clogging को डिग्री मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव, डिजाइन पर्याप्त rinsed र खनिज तेल आधारित नयाँ संरचना भरिएको छ देखि। तर आज, यस्तो उपकरण कम प्राय कम शुद्धता र उच्च ठूलो को प्रयोग गरिएको छ।
शून्य प्रतिरोध फिल्टर
अक्सर यो खेल पाउन सकिन्छ रूपबाट कार। यो एक कागज एक केहि समानता छ। फोम फिल्टर भागहरु रूपमा प्रयोग आवेषण मुख्य फरक छन्। यी उपकरणहरू हावा को एक सक्रिय प्रवाह इन्जिन मा, यो ढिलाइ बिना लगभग पम्प्ड गर्दा, प्रदान नियमित अनुमति हावा को आवश्यक रकम प्राप्त गर्दछ। तिनीहरूले पनि पूर्ण सुसज्जित टर्बो र बाध्य मोटर्स संग मिसिन लागि उपयुक्त छन्। कारण उच्च दक्षता गर्न, स्थापना उपकरण पछि इन्जिन शक्ति पर्याप्त बढ्छ। कारहरुको लागि यस्तो हावा फिल्टर को प्रक्रिया मा फेंकना rattling हल्ला - यो आफ्नो मात्र drawback छ। यसबाहेक, यो विकल्प powertrains गठन लागि अप्रासंगिक छ।
फिल्टर प्रतिस्थापन को आवृत्ति
उपकरण प्रतिस्थापन आवृत्ति धेरै कारक र सञ्चालन अवस्था मा निर्भर गर्दछ। यो पनि खातामा निर्माता को सिफारिसहरू लिएर लायक छ। यो कि विश्वास छ हावा फिल्टर को प्रतिस्थापन कार को बाहिर गर्न हरेक 10 हजार किलोमिटर पर्छ। प्रायजसो यो सत्य हो, तर जाडो र निष्क्रिय उपकरण मेरो कार कम अक्सर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अपरेटिङ अवस्था महत्वपूर्ण हो। नयाँ तत्व धूलो गर्न बारम्बार जोखिम लागि आवश्यक र माटो सडक मा सवारी को नियमित स्थापना, यो मामला मा, मोटर अब पछिल्लो हुनेछ र हानिकारक प्रभाव सुरक्षित गरिनेछ। कार को गहन प्रयोग संग, तपाईं व्यवहार र ह्यान्डलिङ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फिल्टर प्रतिस्थापन लागि आवश्यकता संकेत आधारभूत संकेत हो:
शक्ति विशेषताहरु मा कमी;
निकास ग्याँसहरु कार्बन डाइअक्साइड को उच्च मात्रा समावेश;
ईंन्धन प्रवाह दर अघिल्लो अवधि संग तुलना रूपमा ठूलो हुन्छ।
नयाँ फिल्टर तत्व धेरै सजिलो र सस्ता मोटर मर्मत भन्दा छ स्थापना गर्न देखि यस्तो लक्षण को उद्भव, अत्यन्तै खराब छ।
तपाईं के थाहा गर्नुपर्छ
फिल्टर आधार पनि सामाग्री को प्रकार यसको दूषण को गति मा निर्भर गर्दछ जस्तै, यसको प्रतिस्थापन फ्रिक्वेन्सी असर गर्छ। पहिले, कारहरुको लागि हावा फिल्टर को उत्पादन विशेष पूरण संग आधार कागज प्रयोग निषेध, आज यो कृत्रिम, अधिक टिकाऊ सामाग्री प्रतिस्थापन गर्न आएको छ। त्यसैले निर्माताहरु फिल्टर तत्व को सञ्चालनको अवधिमा एक महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल गर्न सक्षम छन्।
हावा फिल्टर कार कसरी सफा गर्न
यो उपकरण यस प्रकारको सफाई पछि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। र यदि यो साँचो हो तेल फिल्टर, त्यसपछि कागज आधार विकल्प छैन उपयुक्त छ। यो उपकरण सञ्चालनको एक निश्चित अवधिको लागि डिजाइन गरिएको छ, यस्तो उपाय को धारण गर्न यसरी सबैभन्दा inopportune क्षणमा संरचनात्मक क्षति को जोखिम वृद्धि, एकदम यसलाई वृद्धि गर्न सक्षम छ।
धूलो को ठूलो clumps dislodge यो कार हटाइएको र बिस्तारै हुनुपर्छ नयाँ फिल्टर खरीद को संभावना को आपतकालीन सफाई र अभाव को घटना मा। को खुम्च्याउने उपलब्ध छ जब उपकरण हटाउने बिना दिइँदैन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आधार एक पारंपरिक क्लीनर संग साफ छ। सबै काम पछि तपाईं ध्यान कुनै क्षति सुनिश्चित गर्न डिजाइन जाँच्न आवश्यक छ। cleanings संख्या, अनिश्चितकालीन अक्सर गर्मी र लामो यात्राको अघि तिनीहरूलाई resorted हुन सक्छ।
फिल्टर नेत्रहीन सफा हेर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यसको सञ्चालन कम प्रभावकारी हुनेछ, र मोटर गरिबी साफ हावा प्रवाह हुनेछ। समस्या जोगिन, यसलाई विशेष गरी नयाँ रूपमा, पनि सबै भन्दा राम्रो कार हावा फिल्टर छैन त्यसैले महंगा छन्, अनुसार को निर्माताहरु 'सिफारिसहरू संग प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।
फाइलहरू प्रकार: सामाग्री, सञ्चालन सिद्धान्त, प्रयोग
विमान मिसाइलहरु "हावा-को हावा": को मुख्य विशेषताहरु
दुई-च्यानल एम्पलीफायरों: आधारभूत मापदण्डहरु, प्रकार र वर्गीकरण
सेना मा संकेतक के गर्छ?
व्हिस्की उपहार सेट
वायु सेना दिन: रूस यसको नायक सम्मान
"धिक्कार र misfortune को कथा": एक सारांश। "धिक्कार र misfortune को कथा": विश्लेषण, को protagonist को कैरेक्टराइजेशन
जब हुनेछ बिहान रोग र किन यो हुन्छ?
घटना इतिहास सामना। नालीदार कागज बाट पट्टियां को प्रौद्योगिकी सामना: मास्टर क्लास
घरमा छाते को मर्मत
Inflatable डबल बेड - सुत्न आरामदायक ठाउँ र बाँकी
सिंड्रोम एक छोटो PQ: कारण, लक्षण, उपचार